Kufanele ingane iphoqelelwe ukuba idle
Abaningi bakhumbula ukuhlukumezeka kwasebuntwaneni babo: lapho umama noma ugogo bephoqelelwe ukuba badle umanyolo we manna. Ngakho-ke, kungani-ke, lapho siba abazali, siphindaphinda konke kusukela ekuqaleni, sigijima emva kwengane yethu nge spoon bese siphinda amazwi athi, ebuntwaneni, wona ngokwabo bavame ukuzwa kubazali babo: "Ngomama, ngobaba, ngogogo"?
Izizathu zalokhu ezingalungile, kusukela ekufundeni kwezemfundo, ukuziphatha kwabazali, ziningana:
Ukwesaba ukuthi ingane izolamba. Abazali kufanele baqonde ukuthi ingane inemvelo enamandla kakhulu, elawula isidingo sayo sokudla - indlala. Uma umntwana elambile ngempela, akasoze enqaba ukudla. Uma ingane enezinyembezi emehlweni ayo ihlala eduze kweplate egcwele ukudla, futhi yenqaba ukudla naphezu kokukholisa nokusongela - kusho ukuthi umzimba wakhe awudingi ukudla.
* I-stereotype evamile: "U-Upritan unempilo". Eqinisweni, lo mbono awukwazi ukubizwa ngokuthi yiqiniso. Isidingo sokudla kwanezinyane ngalinye ngabanye. Lapha kuncike ekuziphatheni okungenasici komzimba wakhe. Kunjalo nokuphelela: ezinye izingane ngokwabo zikhulu futhi zigcwele, ezinye ziyingcosana futhi ziyingcosana. Uma ingane iphoqeleka ukuba idle, ingakwazi ukuthola isisindo ngokushesha, kodwa lokhu kuyoba yindleko yempilo yakhe. Ngengane, isisu sesilula kancane kancane futhi isisombululo siyaphazamiseka. Ukuphazamiseka kwamagciwane, nakho, kungabangela ukuthuthukiswa kwezifo ezinzulu ezifana nokukhuluphala, isifo sikashukela, ukuhluleka kwenhliziyo, njll.
* Isifiso sokufakazela ngale ndlela ingane ingane yakhe uthando. Isizathu esivamile kakhulu sokuphikisana kokudla ukuthi abazali bayazizwa bengazikholisi, banothando futhi banakekele ingane yabo. Yingakho bezama ukwakha icala labo lokucabanga noma langempela phambi kwalo ngosizo lokudla okuqinisiwe. Kuvela ukuthi ngale ndlela abazali bazama ukuxazulula inkinga yabo yengqondo ngokuhlukumeza ingane yabo ethandekayo.
Ukukhathazeka okwandayo. Abanye abazali bahlale benomuzwa wokuthi ingane yabo iphukile, igxilile, igxilile futhi idonswe. Ngisho noma kunjalo, inkinga yocansi lomntwana ompofu angeke ibe ukuntuleka komsoco. Futhi uma abazali beqala ukunqoba ingane, zonke izinkathazo zabo ziyashesha ngokushesha ngenxa yokuntuleka kwesifiso sezingane zabo.
Yebo, uma ingane ingadli kahle, kungaba yini isizathu salokhu?
Izizathu zingaba okuningi: impilo embi, ushintsho sezulu, ukucindezeleka. Uma, ngezempilo nenhlalakahle yengane, konke kuhambisane nalokho, khona-ke ukudla kwakhe okuncane okusempofu kunganquma izizathu:
* Inqubo yokukhula. Kubonakala ukuthi izingane ezinempilo ezinyangeni zokuqala zokuphila ngokuvamile azihlupheki ngokuntuleka kwesidlo. Into yukuthi ingane ikhula kuze kube yizinyanga ezingu-9, bese ukukhula kwayo kunciphisa kancane, ngokufanele, futhi isidingo sokudla sinciphisa.
* Isimo sezulu esibi emndenini. Ingane ihlale izwa lapho abazali bayo becindezelekile, becasukile noma bekhathazekile. Ubamba isimo sengqondo esibi somama njengesiponji - ngakho-ke ukulahlekelwa kwesidlo.
* Ukuphumula. Isimiso sinikezwa ingane kusukela ekuzalweni. I-choleric ne-sanguine bayamncelisa ngesifuba isifuba somama, futhi i-phlegmatic yenza kahle, ngokuvamile ilele ebusweni. Uma usukhulile, ingane enjalo ingakwazi ukumisa ngomlomo ogcwele ukudla, ukulungisa amehlo akhe endaweni ethile kude. Kodwa akufanele ugijime ingane enjalo - akakwazi nje ukugijima! Futhi lokhu akubonakali ekudleni kuphela, kodwa kukho konke akwenzayo nokukwenza.
Abazali abanenkinga yokudla izingane zabo, Kunconywa ukuthi:
* Ungalokothi uphoqe ingane ukuba idle izitsha ezimcasulayo. Yiqiniso, lokhu akusho ukuthi ingane kufanele idle amaqebelengwane namaqoqo kuphela. Kodwa, noma kunjalo, ukudla kufanele kumjabulise. Izitsha ezihlwabusayo zingaba usizo, futhi ziwusizo - ezihlwabusayo.
* Ukudla kwengane kufanele kuhlelwe. Ukwenqaba ngokweqile ukudla isidlo sasekuseni - ungenzi. Kodwa ngaphambi kwasemini - akukho ukudla okulula.
* Ungaphinde uphazamise isifiso somntwana ngamaswidi, i-gingerbread namakhukhi. Uma umntwana esevele ekwazi ukuchoboza ama-chocolates ayishumi nambili ngaphambi kokuba adle, akufanele kusimangaze ukuthi ikhalenda le-buckwheat lizobonakala lingenakusiza futhi lingathandeki.
Imikhiqizo ebangela ukungezwani kwezingane
Amafutha omnqumo emenyu yezingane
Indlela yokwethula ukondla okungeziwe kumntwana?
Izithelo ze-salads zezingane kusukela ngonyaka
Ukupheka izingane ezisuka eminyakeni emibili ubudala
Ikhrimu enhle elwa nobunzima ekhangele amehlo: kuyini?
Konke mayelana nobulili ehhovisi
Amachashazi abomvu emzimbeni: izimbangela zokubukeka, ukwelashwa
UJordan Dunn waba umklami wezingubo zezingane
Izinkondlo kumkhwenyana kusuka kumakoti
U-Alain Vodonayev ubhekwa ukuthi ube nobuhlobo obuseduze noKurban Omarov
Isifundo sokuqeqeshwa komzimba ekhaya
Isaladi yase-Italiya nge-shizi kanye ne-pasta
Ingane evamile: indlela yokujwayela ngayo?
Umlando wokudalwa kwe-brand Adidas
Ukudla okunembile kakhulu
Okungenziwa kusuka e-aloe: izicathulo zobuso nezinwele ezivela ku-aloe juice